ဒုတိယအကြိမ် ဂဇက်ကွန်ဖရဲင့်စ် ငွေစာရင်းရှင်းတမ်း(Balance Sheet)နှင့်ကျေးဇူးတင် မှတ်တမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » ဒုတိယအကြိမ် ဂဇက်ကွန်ဖရဲင့်စ် ငွေစာရင်းရှင်းတမ်း(Balance Sheet)နှင့်ကျေးဇူးတင် မှတ်တမ်း
ဒုတိယအကြိမ် ဂဇက်ကွန်ဖရဲင့်စ် ငွေစာရင်းရှင်းတမ်း(Balance Sheet)နှင့်ကျေးဇူးတင် မှတ်တမ်း
Posted by padonmar on Jul 25, 2013 in Best Web Awards, Creative Writing | 32 comments
ဒုတိယအကြိမ် ဂဇက်ကွန်ဖရဲင့်စ်ကြီးလည်း အောင်အောင်မြင်မြင်ပြီးသွားပါပြီ။
ပွဲအတွက် အလှူငွေ ၀ိုင်းဝန်းထည့်ဝင်ကြတဲ့သူတွေနဲ့ ရွာသူားတွေ အားလုံးအတွက် ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းလေး တင်ပြပါမယ်။
ဆရာအံက ဘယ်လိုပင် သင်သော်လည်း
ကွန်ပူတာ ၀လုံးတန်း အဖွားကြီးက ပို့စ်ထဲမှာ ဇယားထည့်နည်း မတတ်ပါဘူး။
exel file နဲ့ တင်ရင် ပိုရှင်းမှာဖြစ်ပေမယ့် အခုတော့ သည်းခံခွေးလွှတ်ကြည့်ကြပါ။
May July 10,000
၀င့်ပြုံးမြင့် စာမူခ$15 မှ 15,000
အလင်းဆက် ကဗျာဆုမှ 15,000
စုစုပေါင်း 580,000 ကျပ်ရပါတယ်။
ဆုပန်းချီကား9x 15000= 135,000 (ရွှေတိုက်စိုး ဈေးအဆစ်တော်လို့ ၂၀၀၀၀ တန်ကို သက်သက်သာသာရလိုက်တာပါ)
ဘူဖေး လူ50x 5000= 250,000
Deedo အချိုရည် 60×271.66= 16,300
Alpine ရေသန့် 60x 133.33= 8,000
အချိုရည်/ရေသန့်ကားခ = 4,000
Vinyl = 8,000
စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေ = 421,300 ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။
အလှူငွေ 580000-ကုန်ကျငွေ 421300= ပိုငွေ 158,700 ရပါတယ်။
ကွန်ဖရဲင့်စ်မှာ ရွာ့စာအုပ် ရောင်းရငွေ 88×2500=220,000
လက်ကျန်ငွေ =378,700 ကျပ် ရပါတယ်။
စာအုပ်တွက် Green Rose စိုက်ထုတ်ငွေက 600,000 ဖြစ်လို့
Green Rose က 100,000 စိုက်ထုတ်လိုက်ကြပါတယ်။
အဘဖေါက စုစုပေါင်း 200,000 ဖြစ်ပါတယ်။
ရေသန့်ဘူး 30 နဲ့ အချိုရည် 30 ကျန်ပါတယ်။
ပြန်ရောင်းရငွေကို စာအုပ်အရင်းထဲ ထည့်ပါမယ်။
ပွဲမတိုင်မီ ဆုအတွက် ကျောက်ပန်းချီပင်ရင်း စုံစမ်းပေးတာက အန်တီမမ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇိုင်းထုတ်တာ၊ပုံဆွဲတာ၊ပန်းချီကားအပ်တာ၊ဂုဏ်ပြုစာအပ်တာ၊အချိုရည်နဲ့ ရေသန့်ဝယ်တာ အားလုံးက
ဆယ်အိမ်ခေါင်း ရာသက်ပန် အခမ်းအနားမှူး မိုက်ခဲ တိုက်တိုက် လက်ရာတွေဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲတွက် နေရာနဲ့ အစားအသောက် အော်ဒါပေးဖို့ အခါခါ သွားကြည့်စီစဉ်တာက ဦးကြီးမိုက်နဲ့ ရွှေတိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
Backdrop Vinyl နဲ့ ရေးပေးပါ Plain Vinyl စီစဉ်သူကတော့ လူပြိုဂျီး အမတ်မင်းပါ။
ရွာ့စာအုပ်ကို စာစီတာကအစ စာအုပ်ပုံနှိပ်တာအဆုံး တစ်ဦးတည်း စီစဉ်ပေးသွားတာက Green Rose ပါ။
စာအုပ်တွေကို ပုံနှိပ်တိုက်ကနေ ပွဲအထိ ကားနဲ့ သယ်လာပေးတာကတော့ ငှက်ကထကြီး ဦးဦးပါ ဖြစ်ပါတယ်။
စာအုပ်တွေ ရောင်းပေးတဲ့ ကွမ်းတောင်ကိုင်တွေကတော့ လုံမလေး မွန်မွန်၊ငြိမ်းငြိမ်း၊လူကလေး တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ရွာသူားတွေရဲ့ နာမည်တွေကို ရင်ပတ်မှာ ကပ်ပေးဖို့ စတစ်ကာလေးတွေ စီစဉ်ပေးတာကတော့ e-tone ပါ။
ပျော်စရာ ကံစမ်းမဲလက်ဆောင်တွေ စီစဉ်ပေးတာကတော့ သူကြီးခိုင်၊မနိုဗွီနဲ့ မနီလာစိန် ဖြစ်ပါတယ်။
ရှုခင်းအလှ ဓာတ်ပုံလက်ဆောင်ပေးသူကတော့ ကိုပေါက် ပါ။
ဓာတ်ပုံထည့်ဖို့ ဂဇက်လိုဂိုနဲ့ စာအိတ်လေး စီစဉ်သူက ကို ပီ ချိုကြီး၊လုပ်အားပေး ရွှေတိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
ပန်းပင်၊ဂမုန်းပင်၊နှင်းသီးပင်တွေနဲ့ မျိုးစေ့တွေ လက်ဆောင်ပေးကြသူတွေကတော့ သူကြီး၊မအိ၊ဝေေ၀ တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အခမ်းအနား ပြင်ဆင်ရေး လုပ်အားပေးတွေကတော့ ဦးပါ၊စွယ်တော်ရွက်၊အမတ်မင်း နဲ့ ကော်ဘရာတို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ မှတ်တမ်းတင်သူတွေကတော့ မှော်ဆရာ၊ကောင်းကင်နဲ့ ရွှေပွဲလာ ရွာသူားများပါပဲ။
ဗွီဒီယို မှတ်တမ်းတင်သူကတော့ မှော်ဆရာပါ။
ပွဲလာတက်တဲ့ ရွာသူားတွေအားလုံး ပွဲထဲရောက်တာနဲ့
ရွာ့စာအုပ်တွေ လက်မှတ်ထိုးပေးဖို့ ၊မဲလိပ်လိပ်ဖို့၊မဲဖောက်ဖို့ ကအစ
မနားမနေ ပြောရင်းလုပ်၊လုပ်ရင်းပြောနဲ့ ကျမတို့ရဲ့ ဒုတိယအကြိမ် မန်းဂဇက် ကွန်ဖရဲင့်စ်ကြီး အောင်အောင်မြင်မြင်ပြီးသွားပါကြောင်း၊
နောက်လာမယ့် ၆လ ပွင့်လင်းရာသီမှာတော့
ဦးကြီးမိုက်ဦးဆောင်မယ့် ဒီထက်ပိုပြီး စည်ကားပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းမယ့် တတိယအကြိမ် ကွန်ဖရဲင့်စ်ကို
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်၊ ခင်ခင်မင်မင်၊ စုံစုံညီညီတက်ရောက်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးမှတ်တမ်းမှာ မထည့်မိလိုက်တာ ရှိရင်လည်း သတိပေးကြပါ။
ကျမတာဝန်ယူပေးရတဲ့ ကာလမှာ ကျမဖက်က အဆင်မပြေတာ မှားတာ ရှိရင်လည်း ရွာသူားတွေကို တောင်းပန်ပါတယ်။
.. နောက်အကြိမ်များအတွက်လည်း .. ရွာကိုအပ်ပါကြောင်းနဲ့..
ယခုအကြိမ်မှာလည်း.. ၀င်ရောက်ပါတ်သက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်.. ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း…။
ဂဇက်ပွဲအတွက် ၂ရက်လောက် အိပ်ရေးအပျက်ခံ လှုပ်ရှားသွားပေးတဲ့သူအပေါ် စိတ်ကောက်စရာလားးး၊
လူငယ်တွေလွတ်လွတ်လပ်လပ် လှုပ်ရှားနိုင်အောင် လုပ်ခွင့်ပေးထားခဲ့ပြီး နောက်နားကနေ အဆင်သင့်စောင့်ကြည့်၊ လိုအပ်ပြီဟေ့ဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက် ၀င်ကူပေးတဲ့ ရွာလူကြီးတွေကောင်းလွန်းလို့ပါ။
အမငီး ရာသက်ပန် အခမ်းအနားမှူးဆိုပါလား……….
အဲလို မြှောက်မြှောက်ပီးခိုင်းတတ်တဲ့ လူကြီးတွေကို သား သိပ်မုန်းတာပဲ မေမေ…………….ခွိ…
ဟိုသူကြီးလဲ အတူတူပဲ… ပါတ်သတ်ခွင့်ရလို.ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုပဲ… လူကိုယ်တိုင်ဖြင့်မလာဘဲနဲ.. ပီးတော့ စွပ်ကျယ်ကို သများ ဆိုဒ်မပါပဲ ဆိုဒ်ကြီးတွေ ထည့်ပေးလိုက်တယ်…. မုန်းထာအေ… စွပ်ကျယ်က ၀တ်လိုက်ရင် ဘောင်းဘီတောင်ဝတ်ချာမလိုတော့ဘူး… ဒါနဲ. အံချာဒုံးကို ပေါက်မဲပေးလိုက်တာ……….ဟိဟိဟိဟိ
အဲ့ဒါ ညည်းအကျံပေါ့လေ …
နာ့မလည်း အိုက်စွပ်ကျယ်ဂျီး ဝတ်ပီး ကြွားမို့ လုပ်နေဒါ …
တော်ကြာ ရက်ပါဂျီး အံချာဒုံး ဖစ်တွားမှာစိုးလို့ အသာလေး ပြန်ခေါက်ထည့်ထားလိုက်ရဒယ် …
နီတို့ နှီယောက်ပျော့စ်နေတာ ညက်လုံးထဲ မြင်ကျိတာ ….. စပ်ဖြီးဖြီးနဲ့ ရယ်ရဒယ်အေ့… ခိခိ… ။
စီစဉ်သူ အမပဒုမ္မာကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။
နောက်တစ်ခါတာဝန်ယူရမည့်သူက ဦးကြီးမိုက် ဆိုပါလား။
ဒီလူကြီးဆိုရင်တော့ တတိယမြောက်ပွဲကို တက်တောင်တက်ဖြစ်ပါ့မလားဘဲဗျ၊
ဒီလူကြီးက လူတွေ့ရင် အရင်ကထက် ပိုဝလာတယ်ဘဲ ပြောပြောနေတာ ဆိုးတယ်ဗျာ။
( တကယ်လဲ ၀လာတာပါ )
လောကကြီးမှာ “၀လို့လှလို့ပါလား” လို့သာဆိုရိုးရှိတာပါဗျာ…
ရန်ကုန်ကို အချိန်လေးရကာရောက်ဖြစ်ရင် တွေ့ဆုံချင်ပါတယ်ဗျာ။
ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခွင့်မရလိုက်လို့ တချို့ကွန်မန့်တွေဆို ဖတ်ပြီးမှ မမြင်ချင်ဟန်ဆောင်နေရတယ်။ :'(
အဲဒါကြောင့် အဲဒီပိုစ့်မှ မမန့်ပဲ ဒီပိုစ့်မှာလာမန့်တာ။
ဒါမှ ပွဲမတက်လိုက်ရတဲ့သူတွေ နောင်တကြီးကြီး ရ သွားမှာ …..။)
ကျောက်စ် ဒီတစ်ခေါက်ရွာအပြန် အလုပ်များသွားလို့…
ဂဇက်စုဗူးထဲ မပါလိုက်ရဘူး၊ စက်တင်ဘာပြန်လာဖြစ်ရင်…
ဥက္ကဌအသစ် ဦးကြီးမိုက် ဦးဆောင်မယ့် ဖတ်ရွေးအဖွဲ့ရဲ့ တတိယသက်တမ်းမှာ
အခက်အခဲ တွေလဲ ရှိလာနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့် အကြောင်းရှိလာတဲ့အခါ ရွာ့အမာခံများက စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းပေးကြဖို့ ပန်ကြားလိုပါတယ်။
ကိုစွယ်တော်ရွက်က သူ့လျှပ်စစ်သင်တန်းနေရာကို ရွာ့အရေးအရာတွေတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရာမှာ အလျှင်းသင့်တဲ့အခါ အသုံးပြုဖို့ အခွင့်ပေးကြိုဆိုတာကလဲ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ အ်ိမ်ရှင်က ရေနွေးမှအပ ဘာနဲ့မှ ဧည့်မခံရဆိုတဲ့ စည်းကမ်းလေးထားပြီး အသုံးပြုရရင် အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ သွားလို့လွယ်၊ ကားရပ်လို့ကောင်း၊ ကားမှတ်တိုင်နီး၊ လွတ်လပ်၊ အေးချမ်းဆိတ်ငြိမ် တဲ့ ရှယ်နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။
ကိုကြီးမိုက်ရေ နေရာရော လူပါ တစ်ခါတည်း အပိုင်ဆွဲထားလိုက်ပေတော့-
ဟိုးးး တစ်ခါ ဖတ်ရွေးအဖွဲ့တွေ့ဆုံကတည်းက တင်ပြထားခဲ့တာပါ၊
ကြားထဲမှာ ကိုယ်တိုင် ရန်ကုန်မှာ မရှိခဲ့လို့ပါ။ အခု ပြန်ရောက်လာလို့ ထပ်မံဖိတ်ခေါ်တာပါခင်ဗျ။
ဂဇက် အတွက် တတ်နိုင်တာလေး ဖြည့်ပေး၊လုပ်ပေးခွင့်ပြုပါ။
ဟိ။ ဟိ နဲနဲ လေးတို့ခဲ့အုံးမယ်။
ဆင်ရေတွင်း ဘက် တစ် အိမ်ကျော်မှာ အသုတ်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ရှိတယ်။
အဲ သူနဲ့ ကပ်လျက်က …….
Warmly welcome ပါ ဗျို့
သများကတော့ ပွဲတက်သူအနေနဲ့ ပွဲဖြစ်မြောက်ရေး
စီစဉ်သူအားလုံးကိုကျေးဇူး အကြီးကြီး တင်ပါတယ်ချင့်
စာအုပ်လေးလဲ တော်တော် သဘောကျမိပါကြောင်း
တစ်တပ်တစ်အား လေ နဲ့ အားပေးနေသူ ကြီး မှ
ပွဲဖြစ်မြောက်ရေး အတွက် လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ပြနိုင်သူ များ ကို
နောက်ပွဲ တွေဟာလဲ ဆထက်တပိုး ပိုပြီး စည်ကားလာမှာလို့ မျှော်လင့်ပါကြောင်း
ဥကထကြီး ကကြီးမိုက် အားလည်း ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါကြောင်း
Hǎo wa, gànde piàoliang!
ခုလို အဆင်သင့်လေးလာပြီး ပွဲတက်နိုင်အောင် အစစအရာရာ ကြိုတင်စီစဉ်ကြပါကုန်သော အားလုံးအားလုံးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း….
ကိုပေါက်က တော့ အမြဲတမ်းနောက်ကနေပြီး လိုတာကူပေးတဲ့အလုပ်ဘဲလုပ်ပါမယ်
ဒီလို တွေ့ ဆုံပွဲ တစ်ပွဲဖြစ်ဖို့
တွေးကြည့်ရုံနဲ့ သိနိုင်တာမို့ 
အဘက်ဘက်က ကူညီ လှုပ် ရှားသူ များ
ကျွန်တော့် ကဗျာဆု အတွက် စီစဉ်မယ့်ငွေသားကို ဖလားထဲ ထည့်တဲ့အပြင်
သီးသန့် အမှတ်တရ ဆုတစ်ခုကို
တကူးတက စီစဉ်ပေးခဲ့တဲ့ အတွက်လည်းး
ပွဲကို အခန့်သား လာတက်
နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် လေပန်း ခဲ့ရတာကြောင့်
စီစဉ်သူများကို ကျေးဇူး အထူး အထူး တင်ပါတယ် လို့
ကျုပ်လဲ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လောက်ပဲအလုပ်များများ
လာဖို့ ရန် အဆင်သင့်
Most Popular Award ဆိုတာ ဒါမျိုးကလားးးးးးးးးးးးး
အန်တီ..တားလည်း….ဆုတွေကို ကိုင်ပေးပါတယ်။နောက်ဘီးတော့….လည်း..မိုးရွာလို့ ဗီနိုင်းတွေဖြုတ်ပေးပါတယ်။..နောက်ဘီးတော့ မဲနိုက်တော့လည်း နောက်ပြောင် အော်ဟစ် လက်ခုပ်တီးပေးပါတယ်…ကျွေးတာတွေကိုလည်း စားပေးပါတယ်။ တိုက်တာတွေလည်းသောက်ပေးပါတယ်။ နော့်……။
ဂဂတို့ မောင်နှစ်မ ကို ကျန်ခဲ့တာကိုး၊
ဟုတ်တယ်၊ဂဂ ကူပေးတာ အများကြီးပါပဲ။
ရွာသူားတွေကို မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါ တစ်ရွာလုံးကို ဂဃနဏ သိတဲ့ ရွာသားဟောင်းကြီး ဂဂ ကူရတာပေါ့။
ဂရုပုံ ရှေ့ဆုံးမှာ ကြက်တောင်စည်းလေးနဲ့ ချောချောလေးဆိုတော့ မမနွယ်ပင်ရဲ့ ညီမလေး ဂဂ လို့ အရီးက ထင်သွားသေး။:D
တီတီ ဒုံဒုံ ကိုလည်း ကျေးဇူးအကြီးကြီးတင်မိပါကြောင်း
ကွမ်းတောင်ကိုင် လူကလေး က ပြောကြားလိုပါ တယ် တီတီဒုံဒုံ(ချစ်ချာဂျီး) .. အာဘွား
ကျေးဇူးတင်စာရင်းထဲမှာပါတော့ ရင်တောင်ခုန်မိပါတယ် :harr:
ဒီတစ်ခေါက် ဗလာမပါမလုပ်နိုင်ခဲ့လို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်
နောက်တစ်ခေါက်တွေ့ဆုံပွဲမှာ မဲအတွက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့ အချိန်မရခဲ့ရင်
ရွာ့ကွန်ဖရန်ရဲ့.. ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းDVD လေး.. လက်ခံရရှိပြီဖြစ်ပါကြောင်း.. အမပဒုမ္မာအားအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်..။
ရထားတဲ့အခွေထိုင်ကြည့်နေတာ… အယ်လ်အေနဲ့ရန်ကုန်တော်တော်နီးသွားတယ် ခံစားမိတယ်…
ကျွန်တော်တော့..အခွေ မကြည့်ရသေး။
ရနိုင်တဲ့ နေ ရာတွေဘက်.မရောက်ဖြစ်သေးလို့ ။
အဲဒီပွဲ မှာ.ကိုယ် ဘာတွေ ပြောခဲ့မိလို့ ..ပြောခဲ့မိလဲ..တောင်..သေချာပြန်စဉ်းစားလို့ မရ ။
လူများများရှေ့ ဆို…. ထူပူနေတတ်တဲ့ …
ကိုယ့် လူကြောက်ရောဂါက… နှိပ်စက်နေလို့ …။
ဒီပို့စ်က ကြည့်သူသိပ်မရှိတော့ရင် စတစ်ကီဖြုတ်လိုက်ပေးပါနော်။
ဖတ်ကြည့်တာ ပျော်စရာကြီးပါလား ကွယ် ။